Shir xorriyadda Saxaaafadda looga hadlaayay oo Finland lagu soo gabagabeeyey”SAWIRRO”. | Baydhabo Online
Shir xorriyadda Saxaaafadda looga hadlaayay oo Finland lagu soo gabagabeeyey”SAWIRRO”.
Shirka maalinta Xorriyadda Saxaafadda adduunka, ayaa lagu soo gabagabeyeey magaalada, Helsinki ee waddanka Filand, iyadoo ay ka qeyb-galeen masuuliyiin ka socotay wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya.
Shirkaan oo socday muddo saddex maalmood ah ayaa lagu qabtay magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland, waxaana Soomaaliya uga qeyb-galay agaasimaha Telefishinka qaranka, Naasir Xuseen iyo agaasimaha Wakaaladda SONNA, C/raxmaan Yuusuf Al-Cadaala.
Shirka ayaa inta uu socdey waxaa looga hadlay, sida ay muhiim u tahay in ay adduunka ka shaqeeyaan Saxaafad xor oo dalalkooda ay ixtiraamaan nidaamka Dimoqoraadiga ah iyo in saxaafadda hesho mudnaan ay ku gudbiyaan dhacdooyinka taagan, sida hab dhaqanka dadka soo galootiga dalalka Yurub, taas oo dhalisay dood dheer.
Agaasimeyaasha Telefishinka qaranka iyo wakaaladda SONNA, ayaa dhankooda ku sugnaa doodahahaasi, waxa ay sidoo kale soo dhoweeyeen iskaashiga saxaafadda caalamka oo maanta u shaqeeya hab casri, Soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada saxaafadeedu aad u shaqeyso hadana dhibaatooyin badan ay ku dhacaa.
Shirka waxaa yimid madaxda ugu sarreysa dowladda Finlad, kuwaas oo dhageysanayay talooyinka iyo fakradaha qaybihii shirkaasi ka soo qaybgalay.